Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Guddiga Cusub ee Charcuterie ee Xiga: Soo qaado Muuskaaga!
Flavor & Menu's 10ka isbeddel ee ugu sarreeya sannadlaha ah waxay tilmaamayaan "dimuqraadiyeynta hal-abuurka," halkaasoo qaar ka mid ah isbeddellada makhaayadaha ay hadda dhiirigeliyaan dhaqanka macaamiisha.
Looxyada charcuterie-ka-hortagga ah, cabitaannada muuska-ku-jirta iyo macmacaannada, iyo isbeddellada cusub ee raaxada ee Mexican-ka ayaa ka mid ah 10-ka saameeyayaasha waaweyn ee wadista isbeddellada menu ee 2022, waxay saadaalisay Flavor & Menu-ka daabacaadda cusub ee 10-ka isbeddellada, online at getflavor.com .
Sannad kasta, tifaftirayaasha Flavor & Menu-ka Cathy Nash Holley iyo Katie Ayoub waxay ururiyaan isbeddello kala duwan oo la jaan qaadi doona macaamiisha maanta oo siin doona fursado korriin warshadaha makhaayadda. Waxay muujinayaan isbeddellada dhadhanka ee soo baxaya, bixinta fikrado iftiiminaya "sababta" ka dambeysa mid kasta oo ka mid ah 10. Arrinkan astaanta u ah wuxuu u adeegaa sidii khariidad loogu talagalay hal-abuurnimada, oo siinaya horumarinta menu fikrado ku saabsan hirgelinta suuqa.
"Ururinta sanadkan ee 10ka isbeddel ee ugu sarreeya waxay muujinaysaa isbeddel, taas oo macaamiisha da'da yar ay dhab ahaantii ku jiraan kursiga darawalka marka ay timaaddo dhiirigelinta isbeddelka cuntada iyo cabitaanka," ayay tiri Cathy Nash Holley, Flavor & The Menu's Publisher/Tifatiraha-In-Chief. "Cilmi-baadhisyadayadu waxay caddeeyeen in warbaahinta bulshadu ay gaartay heer ay isbeddellada makhaayadaha ay noqdaan kuwo dhiirigelinaya habdhaqanka macaamilka. Tani waa rogaal celiskii dhawr sano ka hor, markii isticmaalayaashu ay ku bahoobeen makhaayadaha dadaalkooda gaarka ah ee summadaha. Dhawr ka mid ah isbeddellada lagu sheegay arrintan ayaa dib u raacaya xirfadahooda xariifnimada ah ee isticmaalayaasha warbaahinta bulshada iyo saamaynta ka weyn ee ay sameeyeen.
Katie Ayoub, maamulaha tifaftiraha, ayaa ku sifaysay ifafaale sida "dimuqraadiyeynta hal-abuurka." "Kanaallada warbaahinta bulshada ee caanka ah maanta waxay awood u siinayaan oo ay ku dhiirigeliyaan macaamiisha da'da yar si ay u muujiyaan hal-abuurkooda iyo xiisaha ay u qabaan isbeddellada cuntada iyo cabitaanka. Isbeddelladan xiisaha leh ee guriga lagu sameeyo-sida looxyada charcuterie, rootiga muuska iyo quesadillas jeebka-laaban-si degdeg ah ayay dabka ugu qabtaan meeshan, iyagoo helaya xamaasad iyo dhisidda xamaasad loogu talagalay soo noqnoqoshada badan. Kuugyada, kuugada keega iyo khubarada isku dhafka ah ayaa halkaas ka soo kici kara, iyaga oo ka faa'iidaysanaya dhaq-dhaqaaqa pop-ga cusub ee la helay, ka dibna dhadhankan u qaata oo qaabeeya jihooyin cusub oo xiiso leh oo ku saabsan menuskooda," ayuu yidhi Ayoub.
Dhadhanka & Liiska 10ka isbeddel ee ugu sarreeya 2022:
1. Heerka Xiga: Waxaa xoojiyay warbaahinta bulshada, looxyada charcuterie waxay bilaabeen dib u soo kabashada iyaga oo ah kan ugu dambeeya ee la wadaagi karo.
2. Isbaanishka Bocadillos: Isbaanishka fudud, bocadillo ee rusticka ah ayaa guri ka helaya menus-ka Maraykanka.
3. Giriigga casriga ah: Ka fogaanshaha kitschy "Maraykanka" Giriigga ee qeexay cunnada jiilasha, makhaayaduhu waxay dib u habayn ku samaynayaan garaacista cuntooyin iyo maaddooyin dhab ah.
4. Dhadhanka kulaylaha: Iyada oo midabada niyadda-kordhinta, maaddooyinka firfircoon iyo dareenka baxsiga jasiiradda, dhadhanka kulaaladu waxay bixiyaan baxsasho iyo farxad.
5. Raaxada Meksikaanka: Isbeddellada heerka xiga ee suxuunta u qalma sida quesadillas, taquitos iyo birria waxay bixiyaan tacabur badbaado leh oo lagu duudduubay raaxada guriga.
6. Cunnooyinka badda ee ku-saleysan dhirta: Cuntooyinka badda ee ku saleysan dhirta ayaa bilaabaya inay mowjado ka sameeyaan menu-yada, maadaama alaab-qeybiyeyaal hal-abuur leh ay soo bandhigaan alaabo ka duwan adeegga cuntada.
7. Cusbada: milixdu waxa ay helaysaa soo jiidasho iyada oo labadaba dhadhanka xoojisa iyo dhadhanka saamaynta sare leh ee lafteeda.
8. Savory Hand Pies: Fikradaha ku takhasusay pies-gacan ayaa dib u soo nooleeyay mishiinnada hal-abuurka ee agagaarka empanadas, hilib doofaar, keega, puffs iyo in ka badan.
9. Muuska: Soosaarayaasha menu-ku waxay dib u soo celin karaan lakabyada suurtagalka ah ee laga helo muuska is-hoosaysiiya: garaacida dhawaaqyada kulaalayaasha, ku tiirsanaanta raaxada koonfureed ama sahaminta mash-ups eclectic.
10. Cabbitaannada Qaxwaha Qabow: Macaamiisha da'da yari waxay wadaan hal-abuurnimo cabitaan qabow-qaxwaha ah, wadida hal-abuurka menu-ka ee noocyo badan oo codsiyo ah, laga bilaabo tonics-kafeega cusub ee aan alc-ga ahayn ilaa isticmaalka ballaaran ee cocktails.
Dalxiiska Malaysia ayaa suuqa Bariga Dhexe ku iibsanaya ATM-ka ...